Tuesday February 19, 2019 - 08:16:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaa dhawaan Heshiis laba geesooda ah ku kala saxiixday Dowladaha Itoobiya, iyo Jabuuti, heshiiskaasi ayaa dhigaya in la dhiso khad tubooyinka Shidaalka qaada ah kaasi oo laga dhisayo inta u dhaxeey
Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxaa dhawaan Heshiis laba geesooda ah ku kala saxiixday Dowladaha Itoobiya, iyo Jabuuti, heshiiskaasi ayaa dhigaya in la dhiso khad tubooyinka Shidaalka qaada ah kaasi oo laga dhisayo inta u dhaxeeysa dhulka Somaligalbeed ee Itoobiya xooga ku haysato, iyo wadanka Jabuuti.
Qorshahaan ayaa looga dan leeyahay in lagu boobo shidaalka iyo kheyraadka kujira deegaannada Somaligalbeed, iyadoona Dowladda Xabashida Itoobiya ay ka damac santahay in shidaalkaasi ka iibiso dalalka ku yaalla Qaarada Africa, iyo wadamada kale ee caalamka iyadoo arrintaasi u isticmaalaysa Dekeddaha ku yaalla dalka Jabuuti.
Wasiirka Tamarta ee dalka Jabuuti Yoonis Cali ayaa sheegay in Heshiiskaasi uu yahay kii ugu sarreeyay ee ku saabsan shidaalka oo ay wada galaan laba Dowladooda oo ku yaalla Geeska Africa, isagoona sheegay in qiimaha ku baxaya hirgalinta Heshiiskaasi ay gaarayaan malaayiin doollar.
Sida lagu sheegay Heshiiska qorshahaan ayaa waxaa laga fulinayaa dhul lagu qiyaasay illaa 700 Km oo ku yaalla dhulka Somaligalbeed, iyo dhul gaaraya 65 Km, oo ku yaalla gudaha dalka Jabuuti.
Heshiiskaani ayay laba dhinac u gogol xaarayeen muddo dhowr sano ah, iyadoona Dowladda gummeysiga Itoobiya kacdoon xooggan ay kala kulantay bulshada Muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada Somaligalbeed, xili ay halkaasi kawaday qorshayaal ku aadan qodista iyo boobka shidaalka dhulkaasi
Mashruucaan ayaa waxaa maal galinaya Ururka Midowga Yurub, iyo shirkado laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaasi oo saldhigyo ku leh dalka Jabuuti.
Dowladda Itoobiya ayaa kal hore shaaca ka qaaday y in shidaal aad u badan laga helay dhulka Somaligalbeed iyadoona xiligaasi bilawbay in ay heshiisyo la gashon shirkado Shisheeye.
Heshiiska ay wada galeen Itoobiya, iyo Jabuuti, ayaa noqonaya haddii uu hirgalo kii Shanaad oo ka dhaca Qaarada Africa. iyadoona wadamada dhoofiya gaaska ee Qaarada Africa ay kaalmaha hore kaga jiraan Dowladdaha kala Nigeria, Al Jazaa’ir, Liibiya, iyo Masar.
Boobka khayraadka ummada Muslimka ah ee Soomaaliyeed ayaa noqday arin ay u hanqaltaagaan dhammaan dowladaha dariska la ah Soomaaliya, sida Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti. iyadoo dhanka kale dowladda Federaalka Soomaaliya ay dhankeeda u xusul duubantahay in ay dhankeeda khayraadka wadanka u gacangeliso shirkadaha reer galbeedka ee ku caanbaxay boobka iyo bililiqadaha khayraadka Muslimiinta.
Qarax Askar Itoobiyaan ah lagu dilay Oo Ka Dhacay Deegaanka Halgan.